Element Society - Debanye aha na National Citizen Service
Ọ bụrụ na ị dị njikere ịbanye NCS na Element Society, ịnwere ike ịbanye ebe a. Ị nwere ike ma mezue ihe ntinye aka gị zuru oke n'ịntanetị, ma ọ bụ ị nwere ike mejupụta ngosipụta nke mmasị akwụkwọ na anyị ga-ezitere gị akwụkwọ akwụkwọ na post.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ozi ị nwere ike inye anyị oku na 0114 299 9210, ma ọ bụ lelee ngalaba FAQ anyị Ebe a. Ozugbo ị debanyere aha, ị nwere ike mezue ugwo ma ọ bụ ị nwere ike ịkwụ ụgwọ na ntanetị Ebe a.
© 2018 Ikike niile echekwala.